दलित कोटा खाली गर भनेर चम्किनेको लागि… - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
काठमाडौं। इमेज टेलिभिजनकी पत्रकार रुपा सुनारलाई जात कै कारण काठमाडौंमा कोठा नपाएको दाबी गर्दै रूपा सुनारले घरबेटीविरूद्ध जाहेरी दर्ता गराएकी थिईन् । दलित भएको थाहा पाएपछि कोठा भाडामा नदिने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ११ की घरबेटी सरस्वती प्रधानले कोठा भाडामा दिने मन्जुर भइसकेपछि अन्तिममा दलित भन्ने थाहा पाएपछि भाडामा दिन अस्वीकार गरेकी थिइन ।
अहिले रुपा सुनारको विषयमा सामाजिक संजाल भरी नै गाली र ताली दुबै भइरहेको छ । यस्तै उनलाई थुप्रै कलाकारहरुले सर्पोट समेत गरेका छन् । यस्तै लोकप्रिय गायक शिव परियारले पनि बा,हजुरबा पुस्तामा ठाडै अपशब्द गालि वचन बोलेर गरेको बिभेद मात्रै बिभेद थियो,अहिले त माया गरेर बोलेर पो ब्यबहार गरेको रहेछ नि, यस्तो नि बिभेद हुन्छ र ? भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सजाल फेसबुक मार्फत मिठो मिठो बोलेर होस चाहे तितो बोलेर होस त्यँहा जातिय बिभेद गर्न पाईन्दैन भन्दै आक्रोस पोखेका छन् ।
उनको फेसबुक स्टाटस जस्ताको त्यस्तै
विभेदका विषयमा मेरो कुरा :
“नरिसाउन् ल नानी,बरु यसो बस्ने अरू साथी खोजिदेऊ है,यसो आउँदै गर है” ।
कामी भन्ने बित्तिकै म झस्केँ ।
बा,हजुरबा पुस्तामा ठाडै अपशब्द गाली वचन बोलेर गरेको विभेद मात्रै विभेद थियो,अहिले त माया गरेर बोलेर पो व्यवहार गरेको रहेछ नि, यस्तो नि विभेद हुन्छ र ? भन्ने पुस्ता यसपटक सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखिए ।
यो अहिलेको पुस्ताले चैँ विभेद गर्ने शैलीमा अलिक आधुनिकता भित्र्याएको पाइयो । जस्तै हुन्छ नि माया गरे जस्तो गर्दै विभेद कायम राख्ने खतरनाक विभेदको आधुनिक शैली ।
“गाली गरी गरी घाटी रेटे पनि,
अथवा ख्वाम्लाङ्गै अङ्गालो हालेर
गालामै च्वाप्प च्वाप्प मोही खाँदै
घाटी रेटे पनि परिणाम त आखिर
मृत्यु नै हो तर”
माया गरेको रहिछ नि त, चुम्मा पनि त खाकै रहेछ, त्यस्तै घाटी रेटेर मारेको पनि मारेको हो र ? रिसाको, गाली गलौज त्यस्तो केही गरेको थिएन त, कति राम्रो संग म्वाई खाएर घाँटि रेटेको रहेछ नि, त्यसरी घाटीँ रेटदा पनि मृत्यु हुन्छ र ?
सामाजिक सञ्जालमा यसपालि यही सोच स्थापित गर्न बिचार प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी देखियो । प्रस्तुत बिचार अनुसार जातीय विभेद गर्ने शैलीमा पनि अहिले यस्तै आधुनिकतावाद छिरेको प्रस्ट भएको छ ।
हिजो सम्म हामी जातीय विभेद रहित समता समाजको पक्षमा छौँ भन्नेहरूको मुकुन्डो उत्रेको पनि देखियो । उनीहरूले यही ठान्ने रहेछन् कि माया गरेर,मिठो बोलेर गरिने विभेद विभेद नै होइन भनेर । मैले माथि भनिने च्वाप्प च्वाप्प मोही खाएर घाँटी रेटेर मार्ने अपराध होइन भने जस्तै । यस्तो सोच सहित आधुनिक शैलीको जातीय विभेद कायम राख्न चाहनेहरूलाई रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानको यो विषयले झस्काई दिएको हुन सक्छ ।
अशान्ति भो ,सामाजिक सद्भाव खलबलियो, यस्तो के गरेको भन्नेहरूलाई मेरो प्रश्न छ ” हिजो आफूलाई उच्च जात भनिने पुस्ताले, हिजोको कथित तल्लो जात भनिने पुस्तालाई, विभेद गर्दा, कथित तल्लो जात बनाइएका पुस्ताले प्रतिवाद या विरोध गर्न सकेनन् । आफू माथि भएको विभेद सहन बाध्य भए, किनकि उनीहरूलाई कानुन बनाएर हात खुट्टा बाँधिएको थियो,अत्यन्तै कमजोर बनाइएको थियो ।
आफू माथि जबरजस्त लादिएको विभेदको प्रतिवाद गर्न नसक्ने अवस्थामा, विभेद सहन बाध्य पारिएका बर्गले
विभेद सहिदिएकै कारण समाजमा कथित उच्च बर्गल्या शान्ति महसुस गरे । किनकि उनीहरूलाई आफ्नो शान्तिको मात्र चिन्ता थियो। आफूलाई उच्च जातको मसिहा मान्नेले बोली बचन र जुत्ताको नोकले कथित तल्लो बनाइएका जाति माथि प्रहार गरिरहेर आफ्नालागि निर्माण गरेको शान्ति ती जातीय उत्पीडित बर्गलाई त सधैँ मुर्दा शान्ति झैँ महसुश भइरह्यो ।
तर आज समय फेरिएको छ । गाउँ गाउँ, सहर सहरमा धेरै रुपा सुनारहरू छन् । उनीहरू छद भेषी सोचलाई बुझ्न चुक्दैनन् । अन्याय सहदैनन । विरोध गर्छन् । अनि आज पनि आफू उच्च भई राखेर अरूलाई निचको दर्जामा देखिरहन चाहनेहरुको फेरि टाउको दुख्न सुरु हुन्छ ।
‘नरिसाउन् ल नानी’ भनी भनी आधुनिक शैलीमा विभेदलाई निरन्तरता दिई नै रहने हो भने यो विभेद समाजमा राखिरहेसम्म सरस्वती प्रधान र रुपा सुनार चरित्रको द्वन्द्व समाजमा जारी नरहला भन्न सकिन्न र त्यो पक्कै पनि नेपाली समाजका लागि हितकर हुने देख्दिन म ।
त्यसैले आमा,बाबा, हजुरआमा हजुरबुवाका अपराध अपराध नै होइन भन्ने कुतर्क छोडेर जातीय समता कायम गर्ने बाटो तर्फ सबै नेपाली लाग्न जरुरी छ ।
किन भने उत्पीडित बर्गल्या छद भेषी जितिया समानता खोजेको हैन । राज्य, समाज र व्यक्तिबाट मान्छेले मान्छेलाई गर्ने समता मुखी व्यवहार अपेक्षा गरेको हो ।
पहिलो कुरा यो दलित भन्ने शब्द वर्ग वा सम्प्रदाय होइन। यो विभेद अन्त्य कालागि सङ्घर्ष गर्न बनाइएको साङ्गठनिक मोर्चाको नाम हो । हिजोको दिनमा समाजले पानी चल्दैन है भनेर चरम जातीय विभेद गरेका नेपालका करिब 20 देखि माथि जातहरूको साझा सङ्गठन हो दलित । जातीय विभेद विरुद्ध जातीय समानता होइन कि जातीय समताको लागि यसको आन्दोलन जारी छ ।
यहाँ खै किन हो पछिल्लो चरणमा दलित दलित समुदाय भनेर यसलाई जात नै बनाइएको छ यो गलत छ । 2062/2063 पछि बनेको गणतान्त्रिक सरकारले हिजो चरम विभेद भोगेका दलित,मधेसी, जनजातिलाई वर्ग उत्तानको लागि आरक्षण व्यवस्था गरेको हो,समावेशी हैसियतमा कोटा उपलब्ध गराएको हो । जसमा दलितको जम्मा 9% पर्दछ ।
तर आफूलाई सर्वहारा जनताको मसिहा ठान्ने सरकारले अहिले त्यो पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न बन्द गरेको छ । हरेक विभेदको घटनामा एउटा सामन्तवर्गको पीढी सामाजिक सञ्जालमा कोटा खारेज गर, दलित कोटा खारेज गर भनी भनी कुर्लन्छ । उसको मुख्य टार्गेट नै दलित कोटा खारेज गराउनु हो ।
उसले महिला आरक्षण खारेज गर भन्न सक्दैन किनकि महिला आरक्षणका नाममा त 33% उसैको बर्को प्रतिनिधित्व छ । यो विषयमा बोल्दा उसको आफ्नै बर्को टाउको फुट्छ भन्ने उसलाई थाहा छ, त्यै भएर डराउँछ, ।
उसले जनजातिको आरक्षणको विषयमा त झन् बोल्ने कुरै भएन एक नं. प्रदेश नै बन्द हुने सम्भावना भो, जनजातिहरुहरुसंग भिड्न अलि आँट पुगेन उसको।
अब आयो मधेसी समुदाय अहिले तराईका मधेसी समुदायको आरक्षण कतौटिका विषयमा उसले चुइँक्क बोल्न सक्दैन, किनभने देश नै दुइटा बनाउँछु भन्ने थ्रेट र तराई झर्नै बन्द हुने अवस्था आउंन सक्दछ ।
त्यसैले अब बाँकी को रह्यो भन्दा हिजो चरम जातीय विभेद गरेर दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य पारिएका दलित, यिनीहरूलाई पेलेरै ठिक पार्नु पर्छ ,यिनीहरूलाई जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने सोचका साथ दलित कोटा खारेज गर भन्ने अभियानका साथ निशाना साँधिएको छ । के 2062/63 अगाडि विभेद थिएन? दलितको कोटा खारेज हुने बित्तिकै सबले समता मूलक आधिकार पाउँछ?
जातीय समता सहितको समानता कायम हुन्छ ?
कदापि हुँदैन । यो त जातीय रूपमा हिजो दबाइएका, दलनमा पर्न बाध्य बनाइएका, मान्छे पनि होइन कि चरम जनावर भन्दा पनि नीच व्यवहार खप्न बाध्य पारिएका, दलितका आजका पुस्ता, जो समाजमा शिक्षित भएर बोल्न थाले, उनीहरूको पनि पहुँच पुग्न थाल्यो, उनीहरू पनि हजुर हजुर गरेर टाउको निहुराएर बोल्नुको सट्टा आँखामा आँखा मिलाएर व्यवहार गर्न थालेपछि, अहो अब हाम्रो भाग खाने भो, भन्ने डरले फेरि उनीहरूलाई त्यही दासत्वको जीवन बाँच बाध्य पारिनका लागि सामन्त जहिले पनि कोटा खारेज गर भन्दै छ ।
कुनै पनि बहानामा जातीय विभेद हुनु हुँदैन भन्दैन बरु कोटालाई कोठासङ जोडेर बहस गर्छ यो त्यै सामन्तको पीढी हो जसले हिजो मान्छे लाई मान्छे बन्न नदिएकै कारण आज देशमा यत्रो परिवर्तन भई सक्दा पनि एउटा वर्ग हरेक दिन मान्छे हुँ म भनेर आफ्नो अस्तित्व मान्छे भएको संसारलाई बताउँन बाध्य छ ।
आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई यदि कसैले आम्दानी गर्नकै लागि सेवाको माध्यम अपनाएर पब्लिक प्लेटफर्म सम्म लान्छ भने चाहे मिठो बोलेर होस चाहे तितो बोलेर होस त्यहाँ जातीय विभेद गर्न पाइँदैन ।